မမသီရိ: March 2009
လာ ကို...မခေါ်နဲ့ တော့...
သတိ။ ။ အသက် ၁၆ နှစ် အထက် မဖတ်ရ....။
Posted by မမသီရိ at 3/28/2009 06:26:00 PM
ရဲတယ်လေ့ ... ကျဲတယ်လေး...။
သွေးတယ်လေ့ ... မွှေးတယ်လေး...။
(မိန်ရာသီ တပေါင်းလ ဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်သာယွာန်းလို့ ရသေ့သူတော်စင်တွေ တောင်ဈာန်လျှော တယ်ရယ်လို့ စာဆိုရှိတဲ့ လပါ... မြို့ကြီးမှာနေသူတွေ အတွက် အပူရှိန် တိုးလာတာကလွဲ လို့ သိပ် သတိထားမိကြမှာ မဟုတ်ပေမဲ့.. တောရိပ် တောင်ရိပ် နဲ့ နီးတဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေ မှာတော့... သာယာလှတဲ့ သဘာဝ အလှအပ တွေကို.. တစိမ့်စိမ့် ခံစားနိုင်ကြပါတယ်.. မနက်စောစော ပိုင်းမှာ.. နှင်းဥလေးတွေ သီးနေပြီး.. နေရင့်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့.. မြူခိုးတွေ ဆိုင်းနေတဲ့.. တောတောင် သဘာဝ အလှ၊ ရာသီ အလိုက်ပွင့်ကြတဲ့ ပေါက်၊ လက်ပံ၊ ကသစ် စတဲ့ ပန်းနီနီတွေ က ဟိုမှာ..ဒီမှာ..၊ ရောင်စုံ ဖယောင်းသစ်ခွ ဖြူဖြူ၊ ပြာပြာ၊တွေ ကလဲ လက်ညှိုးထိုး မလွဲ.. ငှက်ကလေးတွေကလဲ တီတီတျာတျာ.. ကျီကျီကျာကျာ .. တေးသီလို့.. မောင်နှံ လည်ယှက် သစ်ရိပ်တွေ ထက်မှာပေါ့..။
ဇာတိမြေကို အလွမ်းဆုံးအချိန်ကို ပြောပါဆိုရင် ကျမအတွက်တော့.. ဒီရာသီပါပဲ.။ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်တဲ့ ကျေးရွာလေး တရွာရဲ့ အစွန်က ခြံကျယ်ကြီးထဲ မှာ ရှိနေမဲ့.. ပြုစုသူမဲ့.. သစ်ခွ ရိုင်းတွေ..။ တောင်စောင်းလေးပေါ် မှာရှိတဲ့ အိမ်မြင့်မြင့်ပေါ် က လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်. ဆင်ခြေလျောလေး.. ဆင်းသွားတဲ့ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ မြေနီ လမ်းလေး.. ဟိုးဝေးဝေး မှာတော့.. တောင်တန်း ပြာပြာတွေ က.. ဘာမှ မသိလို ပဲ အိနြေ္ဒရရ လဲလျောင်းကောင်းတုန်း ပဲ နေမှာပေါ့... ကျမရဲ့ မနက်ခင်းတွေကို လာနှုတ်ဆက်ဖူးတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကရော.. ကျမလွမ်းနေတာ.. သူတို့ သိပါ့မလား.။ .. မြို့ပြရဲ့ အရ်ိပ်တွေ နဲ့ ဝေးကွာ တဲ့.. တ်ိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရွာလေး.. ဘေးနားကတောင်ကုန်း မိုမို တွေ... နွေဦးပန်းတွေ.. ကျေးငှက်လေးတွေ ရဲ့အသံတွေ.. ခြောက်သွေ့နေတဲ့..လယ်ကွင်း မှိုင်းမှိုင်းတွေ.. ပြီးတော့.. ဘယ်တော့မှ ပြန်မရ နိုင်တော့ တဲ့.. ငယ်ဘ၀တွေ..
ကျမ ဘယ်ကို ပဲ သွာသွား .. သယ်သွားတဲ့ အထဲမှာ.. ကျမ ငယ်ငယ် ထဲက ခုချိန်ထိ စိတ်ကူးပေါ်တိုင်း ချရေးထား တဲ့. .. ကဗျာ မှတ်စု အကြမ်းတွေ .. ငယ်ငယ် ထဲ က အုံးခဲ့တဲ့ ခေါင်းအုံးလေး တလုံး... ငယ်ငယ် ထဲ က သောက်ခဲ့တဲ့ ကော်ဖီခွက်လေး တခွက် နဲ့.. နောက်ပိုင်း ကင်မရာလေးတလုံး ပိုင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ.. တွေ့ရာ မြင်ရာ ဖမ်းရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထည့်ထားတဲ့.. IBM USB 2.0 တစ်ခု ပါ ပါ တယ်..။
အဲဒီအထဲ က ပုံလေး တချို့ ကျမလိုပဲ အိမ်လွမ်းနေသူတွေ အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရွက်ကြွေတွေ နဲ့ လမ်းကလေး
နွေဦး ဆည်းဆာ အလှ..
လန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ ဖယာင်းဖြူဖြူ တွေ
Posted by မမသီရိ at 3/18/2009 08:31:00 PM
Labels: ကဗျာ, ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း
ရာသီတွေ ပေါင်းစပ်လိုက် တဲ့ အခါ..
မလုံခြုံ တဲ့ .. အုံ့မှိုင်းခြင်းရဲ့ အောက်..
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို ရှိနေခဲ့တဲ့...
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့.. ချစ်ခြင်းတရားတွေ က.
ဟိုး.... ဝေးဝေး မှာ....
တကဲ့ကို... ကိုယ် နဲ့ မဆိုင်စွာ....
လောက ရဲ့ လမ်းမ တခုပေါ် က... ငါ......။
ခံယူချက်တွေ ရောင်းစား တဲ့ အထဲတော့ မ၀င်လို..
ချိုချို သာသာလေး ပြောပြီး..
နောက်ကျော ဓါးနဲ့ ထိုး..
အန္ဓ လူအမျိုးတော့ မဖြစ်လို....
ကြည်နူးစရာများလဲ မျှဝေ ခံစား..
လူတယောက်အဖြစ်ပဲ.. ရ ရလို...။
ပုံစံတကျ.. ရှိချင်မှ ရှိတတ်တယ်
လူ ပီသ ဘို့အတွက်
... ဆက်လျှောက် သွားမယ်...။
မမသီရိ (၁၅.၃.၂၀၀၉ အတွက် အမှတ်တရ)
Posted by မမသီရိ at 3/14/2009 06:00:00 PM
မင်း မလိုအပ်လို့ ထားခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက်.
မင်းလိုအပ်လို့ တောင်းခဲ့တဲ့ အရာတွေကျ
ကိုယ် ပေးဘို့ မစွမ်းနိုင်ခဲ့ တာ..
ဂလိုက်ဒါ ပြာပြာလေး တခုအတွက်..
ကံကြမ္မာ မျက်နှာသာ ပေးခဲ့သမျှ
နောက်ဆံ မတင်းပါနဲ့ ဂလိုက်ဒါလေးရေ...
လေဟုန်တကြော...မျောလိုရာ မျော ပါလေရော့ကွဲ့..။
ထားခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက်တော့..
၀မ်းမနည်း ပါနဲ့ ကွယ်......။
Posted by မမသီရိ at 3/05/2009 05:45:00 PM